celebrity – enagrikkhabar
मह जोडीसँग तीन घण्टा
साप्ताहिकको इतिहासमै पहिलो पटक मह जोडीलाई मध्यपृष्ठमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय भए पनि मह जोडीबाट कस्तो प्रतिक्रिया आउने हो भन्ने कुराको अनुमान गर्न गार्‍हो थियो । त्यसै पनि महका म अर्थात् मदनकृष्ण श्रेष्ठको स्वास्थले साथ देला–नदेला भन्ने थियो । उहाँकी धर्मपत्नी स्वास्थलाभ गरिरहनुभएकाले उहाँबाट फोटोसेसनका लागि समय उपलब्ध होला कि नहोला भन्ने आशंका पनि उत्तिकै थियो ।
गत शुक्रवार बिहान हरिवंश आचार्यसँग मोबाइलमा सम्पर्क गरियो । साप्ताहिकको गाईजात्रा विशेष अंकका बारेमा जानकारी गराउँदै साप्ताहिकले आफ्नो मध्यपृष्ठमा मह जोडीलाई प्रस्तुत गर्न चाहेको कुरा अवगत गराइयो । आचार्यले एकै पटकमा प्रस्ताव स्वीकार गर्दै भन्नुभयो– ‘सधैं राम्रा–राम्रा सुन्दरीको फोटो आउने ठाउँमा हामीलाई ल्याउने निर्णय गर्नुभएछ, म मदन दाइलाई पनि जानकारी गराउँछु । हामी दुवै जनाको समय मिलाएर तपाईंहरूलाई फोटोसेसन गर्ने मिति, स्थान तथा समय अवगत गराउँछु ।’
पहिले साउन १३ गते शुक्रबारका लागि फोटोसेसनको मिति तय गरियो । मिति निर्धारण गर्दा उक्त दिन जनैपूर्णिमा तथा नागपञ्चमी पर्छ भन्ने कुराको हेक्का भएन । चाडपर्वको दिन भएकाले साउन १५ गते आइतबारका दिनलाई फोटोसेसन सारियो । लोकेसनका लागि हरिवंश आचार्यका छोरा मोहितवंश आचार्यद्वारा कुपण्डोलमा सञ्चालित ब्रिक्स क्याफे रोजियो ।
आइतबार दिउँसो ठीक १ बजे साप्ताहिकका फोटो पत्रकार महेश प्रधानसहित पंक्तिकार ब्रिक्स क्याफे पुग्यो । हरिवंश आचार्य श्रीमती रमिला आचार्यसहित निर्धारित समयभन्दा आधा घण्टाअघि नै लोकेसनमा पुगिसक्नुभएको थियो । ‘मदन दाइ आउँदै हुनुहुन्छ,’ हरिवंशले भन्नुभयो— ‘मचाहिं मेकअप गर्दै गरौं होला ?’ आचार्यले मेकअप प्रारम्भ गर्ने प्रस्ताव राखेपछि श्रीमती आचार्यले मेकअप किटबाट सौन्दर्य सामग्री बाहिर निकाल्दै आचार्यलाई सिँगार्न थाल्नुभयो ।
पूर्वनिर्धारित कन्सेप्टअनुसार हरिवंश आचार्यले नेवार समुदायकी महिलाले लगाउने पहिरन लगाउने निश्चित गरिएको थियो । त्यसैअनुरूप श्रीमती आचार्यले आफ्ना श्रीमान्लाई महिला बनाउन थाल्नुभयो । मेकअप भैरहँदा नै मदनकृष्ण श्रेष्ठको आगमन भयो । ‘ओहो ! हरिवंश त हरिमाया नै बनिसकेछ नि,’ मदनकृष्णले भन्नुभयो– ‘म पो अलि ढिलो भएछु । ठीकै छ, हरिमाया बन्न अलि समय लाग्छ । म त मदनवंश बन्ने न हो ।’
फोटोसेसन गर्ने प्रस्ताव राखेकै दिन हरिवंश आचार्यलाई महिला तथा मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई पुरुष बनाउने साप्ताहिकको योजना उहाँहरूलाई सुनाइएको थियो । ‘बडो गज्जबको आइडिया फुराउनुभएछ, त्यही ठीक हुन्छ,’ हरिवंशले भन्नुभयो– ‘युट्युबमा हरिमाया शीर्षकको नेवारी गीतको म्युजिक भिडियो छ, त्यो एकपटक हेरेर हामीलाई खबर गर्नु न । तपाईंहरूलाई चित्त बुझ्यो भने मदनदाइ र म त्यही गेटअपमा प्रस्तुत हुन्छौं । त्यसमा म हाकुपटासीको आधुनिक स्वरूपमा हल्का ग्ल्यामरस देखिने नेवार्नी युवतीका रूपमा प्रस्तुत भएको छु । साप्ताहिकको मध्यपृष्ठमा हामी त्यही वेशभूषामा प्रस्तुत भयौं भने पाठकहरूलाई पनि रमाइलो लाग्नेछ ।’
हरिवंशको आग्रहमा पासपुच अमेरिकाले आफ्नो २५ औं वार्षिकोत्सवको अवसर पारेर गत अक्टोबर महिनामा अमेरिकामै आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमका क्रममा खिचिएको मह जोडीको नेवारी गीत हरिमायाको म्युजिक भिडियो हेरियो । मह जोडीकै स्वरको नेवारी भाषाको उक्त दोहोरी गीतका शब्द तथा संगीत मदनकृष्ण श्रेष्ठले तयार पार्नुभएको हो । पासपुचकै आग्रहमा उक्त गीत मह जोडीले काठमाडौमै रेकर्ड गरेर अमेरिका लगेको थियो । कार्यक्रमका क्रममा मह जोडीको आकर्षक प्रस्तुति क्यामेरामा कैद गरेर म्युजिक भिडियोका रूपमा युट्युबमा राखिएको हो । उक्त भिडियो झन्डै साढे ३ लाख पटक हेरिसकिएको छ ।
‘म ब्राह्मण समुदायको मान्छेले नेवारी पहिरनमा प्रस्तुत भएर नेवारी भाषाकै गीत गाउँदै नेवारी संस्कृतिमै आधारित नृत्य गरेको दर्शकहरूलाई असाध्यै मन परेछ,’ हरिवंश आचार्यले जानकारी दिँदै भन्नुभयो— उक्त कार्यक्रम प्रत्यक्ष हेर्ने दर्शकहरूले पनि असाध्यै रमाइलो मान्नु भएको थियो । मदनकृष्ण श्रेष्ठले पनि उहाँहरू दुई जनाको उक्त रूप तस्बिरका रूपमा बाहिर आओस् भन्ने चाहना राख्नुभएपछि हरिवंश आचार्यलाई हरिमाया तथा मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई मदनवंश बनाउने निर्णयले मूर्त रूप पाउने पक्का भएको हो ।
मेकअप आर्टिस्ट रमिला आचार्यले झन्डै आधा घण्टाको मेहनतपछि हरिवंशलाई हरिमाया बनाइसक्नुभएको थियो । त्यस क्रममा उहाँले क्रिम, पाउडर, लिपस्टिक, नेलपोलिस, धागो, युवतीको झैं लामो केश एकपछि अर्को गर्दै हरिवंश आचार्यको अनुहार तथा केशमा सजाउनुभएको थियो । हरिवंशलाई हरिमाया बन्न आधा घण्टाभन्दा बढी समय लाग्यो भने मदनकृष्णलाई मदनवंश बन्न खासै समय लागेन । ‘मैले त दौरा–सुरुवाल र ढाकाटोपी नै लगाइदिएँ,’ ढल्किएको टोपी मिलाउँदै मदनकृष्णले भन्नुभयो– ‘म त तयार भएँ हरिमाया, तिमी पनि तयार भयौ ?’ मदनकृष्णको जिज्ञासामा हरिवंश एकपटक झसंग हुनुभयो । उहाँले आफ्नो कान बुच्चै भएको थाहा पाउनुभएछ । ‘बर्बाद नै भयो नि, हरिवंशले श्रीमतीतर्फ नजर दौडाउँदै भन्नुभयो— ‘कानमा लगाउने गहना (नेवारी भाषामा मापसे) त घरमै छुटेछ । त्यो मापसे नलगाई त यो फोटो खिच्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । नेवारी पहिरनमा उक्त गहना अनिवार्य छ ।’ ‘त्यो त अमेरिकामै छुटेको थियो, रमिलाले भन्नुभयो– ‘मैले हजुरलाई भन्नै भुलेछु, अमेरिकाको सांस्कृतिक कार्यक्रमको दौडधूपका क्रममा त्यो त उतै छुट्यो ।’ ‘अब के गर्ने ? त्यो नभै हुन्न, सधैं अरूलाई हँसाइरहने हरिवंश गम्भीर भएको देखेपछि मदनकृष्णले मोबाइलमा कसैसँग सम्पर्क गर्नुभयो । ‘ल मैले व्यवस्था मिलाएँ,’ दंग पर्दै मदनकृष्णले भन्नुभयो– ‘एकपटक बागबजारसम्म पुग्नुपर्ने भयो ।’
हरिमायाको पहिरनको व्यवस्था गर्ने बागबजारस्थित नाट्येश्वरी ड्रेस हायर सेन्टरमा उक्त गहना भएको जानकारी पाएपछि साप्ताहिककर्मी बागबजारतर्फ दौडिए । सबै कुराको व्यवस्था भएपछि फोटो पत्रकार महेश प्रधानले करिब तीन बजे क्यामेराको लेन्स खोले । एक–पछि अर्को पोजका लागि हरिमाया र मदनवंशले रोमान्टिक हाउभाउ प्रस्तुत गरिरहनुभयो । हरिमाया युवती भएकाले मदनवंशले उहाँलाई जिस्काएको, दुवै जना जिस्किरहेको कन्सेप्टमा करिब एक घण्टा लगाएर फोटोसेसन पूरा भयो ।
त्यसक्रममा मह जोडीले लामो समयपछि फोटोसेसनमा सक्रिय भएको अनुभव रोमाञ्चक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । ‘म त बूढो मान्छेको फोटो कसरी साप्ताहिकको मध्यपृष्ठमा राख्ने होला भन्ने सोच्दै थिएँ,’ मदनकृष्णले भन्नुभयो– ‘तपाईंहरूको कन्सेप्ट गज्जबको रहेछ ।
पत्रिकामा हरिमाया र मदनवंशलाई देखेर सबै जना दंग पर्ने भए बा !’ यता हरिवंश आचार्य भने फोटोसेसनका लागि तयार भैसकेपछि केही लजाइरहनुभएको थियो । ‘कार्यक्रममा धेरै पटक महिलाका रूपमा प्रस्तुत भएको छु, त्यो बेला ब्याक स्टेजबाट सोझै स्टेजमा उत्रने भएकाले खासै अफ्ट्यारो लाग्दैनथ्यो, उहाँको भनाइ थियो– ‘यहाँ आउटडोर फोटोसेसन भएकाले बाहिर निस्कनै लाज लागिरहेको छ ।’ यद्यपि फाटोसेसन प्रारम्भ भैसक्दा–नसक्दै हरिवंश सामान्य भैसक्नु भएको थियो ।
अहिले के गर्दैछ मह जोडी ?
फोटोसेसन सम्पन्न भएपछिको अनौपचारिक कुराकानीमा मह जोडीले आफ्ना आगामी महत्वाकांक्षी योजना पनि साप्ताहिकसँग सेयर गर्‍यो । मह जोडी यतिबेला दुईवटा नेपाली चलचित्रको स्क्रिप्टमा काम गर्दैछ । आचार्यका अनुसार दसैं–तिहारपछि फ्लोरमा जाने गरी दुईवटा चलचित्रको स्क्रिप्टमा काम भैरहेको छ । ‘दुईमध्ये एउटा चलचित्रको सम्पूर्ण छायांकन इन्डोर हुनेछ,’ आचार्यका अनुसार चलचित्रका लागि कलाकार तथा प्राविधिकहरूको पनि टुंगो लागिसकेको छ ।
केही समयपछि चलचित्रको शीर्षक, कलाकार तथा प्राविधिकहरूका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गर्ने मह जोडीको योजना छ । ‘अर्को स्क्रिप्ट व्यवसायिक चलचित्रको छ, मदनकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार उक्त चलचित्रका कलाकारहरू पनि निश्चित भैसकेका छन् । दुवै चलचित्रको छायांकन सँगसँगै गर्ने कि पालैपालो गर्ने भन्नेमा यो जोडी छलफलकै क्रममा छ । दुवै चलचित्रमा मह जोडी लेखन, निर्देशन एवं अभिनय आदि विधामा सक्रिय हुनेछ ।
आयुष्मानले रति ११ बजे प्रियंकालाई दरबारमार्ग लगेको खुलासा
प्रियंका भन्छिन ‘बाथरुममै मज्जा’ ||
अयुश्मान र प्रियंका कार्कीको भयो यौन काण्ड विडियो लिक्द !!
को ‘Chapali उचाइ 2’ debut अभिनेता परमिता आर एल राणा र Ayushman Desraj श्रेष्ठ बीच सम्बन्ध सबैभन्दा सहरमा सम्बन्ध बारे कुरा को एक भएको थियो। तर, तीन-वर्ष लामो सम्बन्ध पछि यी दुई प्रेम चरा अलग बाटोमा हिंड्न छान्नुभएको छ। नयाँ समाचार अनुसार, परमिता र Ayushman सम्बन्ध अन्त गर्न आएको छ पुष्टि गरेका छन्। Ayushman रिपोर्टअनुसार अर्को अज्ञात केटी फेला छ। अनलाइन पत्रिका एक साक्षात्कार मा, परमिता तिनीहरूले क्यारियर मा अधिक ध्यान र प्रत्येक अन्य देखेर रोक्न निर्णय गरेको बताए छ। पत्रिकाको तिनीहरूले प्रत्येक अन्य देखेको छैन सप्ताह गरिएको छ कि दाबी।
म आफ्नो इन्स्टाग्राम प्रोफाइल जाँच गर्दा, म पनि परमिता र Ayushma दुवै पनि प्रत्येक अरूको फोटो हटाइएको छ कि फेला परेन।
परमिता आर एल राणा हुनुहुन्छ?
परमिता ‘Chapali उचाइ 2’ मा शुरू भयो बेहतरीन गर्ने एक अभिनेत्री छ। त्यो अर्को चलचित्र साइन इन गर्न अझै छ। तर, त्यो पनि केही सौन्दर्य प्रतियोगिता शीर्षक जित्यो थियो जो एक प्रसिद्ध मोडेल छ। त्यो पनि प्रसिद्ध गीतहरू केही आवरण संस्करण गरेको छ जो एक गायक छ।
त्यो परमिता मात्र पहिचान छैन। परमिता celebrityhood उनको जीन चलिरहेको एउटा प्रसिद्ध बच्चा छ। उनको महान् आमा प्रसिद्ध र शायद नेपाल मा पहिलो महिला गल्फ खेल्ने व्यक्ति थियो। परमिता आमा पनि नेपाल एक प्रसिद्ध मोडेल थियो। 204 वर्षसम्म नेपाल शासन कि परिवार – परमिता पनि राणा कुल पर्छ।
Ayushman Desraj जोशी श्रेष्ठ हुनुहुन्छ?
परमिता जस्तै Ayushman Desraj जोशी श्रेष्ठ पनि सेलिब्रिटी बच्चा छ। Ayushman आमा नेपाल एक प्रसिद्ध बैंकर, Raveena Desraj श्रेष्ठ छ। एक बैंकर हुनुको साथै, त्यो पनि मनोरञ्जन उद्योग मा राम्रो तरिकाले ज्ञात छ।
Ayushman आफूलाई पनि आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाइसकेको छ। ‘Chapali उचाइ 2’ र Priyanka कार्की संग ‘Katha काठमाडौं’ को सुटिङ हाल व्यस्त मा शुरू भयो बेहतरीन गर्ने एक अभिनेता रहेको अलग्गै, Ayushma पनि धेरै राम्रो हस्ताक्षरकर्ता छ। Ayushma र Priyanka गरेको र नेपाली र अंग्रेजी कभर गीतहरू सहित गीतहरू एक जोडी को संगीत भिडियोहरू जारी छ।
एक अभिनेता र गायक हुनुको साथै Ayushman पनि एउटा भिडियो जकी, रेडियो जकी, र एक मोडेल छ। परमिता आर एल राणा जस्तै Ayushman पनि प्रशंसक अनुयायीहरूलाई हजारौं सामाजिक मिडिया सेलिब्रिटी छ।
Priyanka कार्की ब्रेक अप लागि दोष गर्न छ?
यो विभाजन समाचार Ayushman ‘Katha काठमाडौं’ मा Priyanka कार्की संग मिलेरको दाँया पछि आए। आफ्नो पहिलो चलचित्र ‘Chapali उचाइ 2’ जस्तै परमिता Ayushman दोस्रो चलचित्र छैन समावेश छ।
ब्रेक अप को समाचार अघि लिएको एक साक्षात्कार मा, Ayushman उहाँले Priyanka कार्की प्रेम र उनको अभिवादन बताए थियो। उहाँले स्वीकार हुनेछ छन् Priyanka प्रेम प्रस्ताव भने बारेमा पत्रकार गरेको प्रश्न – त्यो संभावना लाग्छ छैन हुनत गर्नुभयो तर उहाँले पनि उहाँले पक्कै पनि एक प्रेमिका रूपमा उनको स्वीकार भनेर थपियो।
Priyanka कार्की र Ayushman कभर गीतहरू र संगीत भिडियो एक जोडी गाइरहेका मा मिलेरको थियो। पहिलो कभर गीत Priyanka गाए Ayushman एक युगल गीत थियो।
Priyanka पनि Ayushman शीर्ष 10 भएकालाई त्यो प्रेम को रूपमा छान्नुभएको थियो। (तलको भिडियो हेर्न)
एक बहिनी – तर, Priyanka धेरै Ayushman र Ayushman उनको दीदी भनिएको भन्दा पुरानो छ। त्यसैले, मलाई लाग्छ छैन यो ब्रेक अप भएको छ जसले Priyanka छ।
मलाई लाग्छ छैन हुनत Priyanka को विभाजन संग गर्न केहि छ, म लोकप्रिय भनाइ पनि विश्वास – “! केहि प्रेम र युद्ध मा हुन सक्छ”
हामी निष्कर्षमा मा कूद अघि प्रतीक्षा गर्न आवश्यक हुनेछ। तपाईं तबसम्म टिप्पणी गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ।
ज्योति मगरले दिईन हरियो महिना साउनको फोटो सुट हेर्नुहोस १० हट फोटो (फोटो फिचर)
गायिका तथा मोडल ज्योति थापा मगर केही समय यता चर्चामा छिन् ।
उनले नृत्य गरेको ‘तल पनि पिरलो माथि पनि पिरलो चोरी खान पल्केको यो ढाडे विरालो भन्ने’
भन्ने बोलको गीत उनले गरेको अभिनयपछि उनलाई ब्लू फिल्म खेल्ने सुझाव समेत आयो ।
ज्योति मगर यहाँ भने तीजको अबसर पारेर साउन महिना मै हरियो पहिरनमा फोटो सुट गराएकी छन |
जुन फोटो सुटमा ज्योति मगरले आफ्नो बक्ष्य स्थल पूर्ण रुपमा छोप्न सकेकी छैनन् | हेरौ केहि फोटो सुट
विश्व ठुलो बेन्ड लिङ्क इन पार्क नेतृत्व गायक चेस्टर बेनिंगटन 41 मा आत्महत्या देखि मृत||
चेस्टर बेनिंगटन, नेतृत्व गायक र लोकप्रिय alt-रक को गीतकार, न्यू-धातु ब्यान्ड Linkin पार्क मृत एक पलोस Verdes संपदा, लस एन्जलस घरमा बिहान फेला परेन।
लिङ्क इन पार्क ब्यान्ड सदस्य माइक Shinoda एक Tweet बताउँदै संग बेनिङटन मृत्यु पुष्टि “स्तब्ध र heartbroken, तर यो साँचो हो।” बेनिङटन 41 थियो।
सुरुमा, TMZ ‘आफ्नो आफ्नो व्यवस्था-प्रवर्तन स्रोतहरू Bennigton कारण आत्म-inflicted झुन्डिएका गर्न मर्नुभयो भनेर तिनीहरूलाई भन्नुभयो कि रिपोर्ट। लस एन्जलस काउन्टी कोरोनर कार्यालय देखि यो एक आत्महत्या रूपमा मामला छानबिन गर्दै छ भनेर पुष्टि गरेको छ।
बेनिङटन चर्चित निराशा, पदार्थ दुरुपयोग र गंभीर चरम पेट र गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल दुखाइ सहित शारीरिक रोगव्याधि को एक नम्बर संग आफ्नो लडाई को आफ्नो छलफलहरू मा सिधै थियो। आफ्नो गीत, साथै, अक्सर मानसिक-स्वास्थ्य समस्याहरू, पारिवारिक सम्बन्ध र व्यक्तिगत अलगाव को गाढा पक्षमा dwelled।
1996 मा यसको जग देखि – पहिलो Xero रूपमा, त्यसपछि हाइब्रिड सिद्धान्त रूपमा, त्यसपछि Linkin पार्क रूपमा – बेनिङटन गरेको दल एक क्रोधित, हिप-हप infused ले आधुनिक रक मा, गिटार, नमूनाहरू र interspersed र्याप गीत दुर्घटनाग्रस्त मा भारी प्रस्ताव राखे। बेनिङटन 1999. बेनिङटन मा समूहले समूह शन Dowdell र उहाँको मित्र को एक सदस्य भएको थियो सामेल? र ग्रे Daze।
शायद एक महत्वपूर्ण मनपर्ने गर्दा, Linkin पार्क व्यापक, व्यग्र प्रशंसक आधार, कार्य एक अनुमान 68 लाख रेकर्ड बेचन र बेच रंगशालामा संगीत हजारौं प्रदर्शन गर्न अनुमति एक निम्न थियो। MTV2, रेडियो प्ले र स्थिर दौरा मा प्रदर्शनमा मार्फत, Linkin पार्क प्रारम्भिक 2000s को सबैभन्दा लोकप्रिय हार्ड-रक प्रेरित एक भए। यो घर आफ्नो गीत “Crawling” र ब्यान्ड गरेको ट्रयाक rapper जे-Z संग “दोहराना / Numb” को लागि एक सर्वश्रेष्ठ र्याप / सुंग सहयोग Grammy 2006 मा लागि 2002 मा एक सर्वश्रेष्ठ हार्ड रक प्रदर्शन Grammy लिए।
दिपाश्रीले गरिन संजोग कोइरालासँग विवाह
Deepa Shree Niraula is Nepalese actress, comedian, and radio personality best known for her role in the Nepali television serial Tito Satya. She gained prominence among the Nepali audience after her well-known role of Dhaniya in the radio show Dhaniya ko Duniya.She is the director of one of the highest grossing Nepali comedy film Chhakka Panja.
आफु केपी ओली बाट सम्मानित हुन पाउंदा सुन्तलीले भावुक हुदै दिइन यस्तो मन्तव्य ! (भिडियो हेर्नुहोस)
Dhurmus-Suntali Foundation isadedicated social organization working in the field of arts, awareness, reconstruction and public service. Through these works, the foundation has been continuously working for the construction of better and prosperous Nepal.
Construction of 20 earthquake resistant houses for earthquake victims of Pahari community in Kavre, 66 earthquake resistant houses for earthquake victims of Tamang community in Giranchour, Sindupalchowk and not the least, the construction of 53 handicap friendly and child friendly for humanity and welfare are some significant works all citizens have admired.
Even then our foundation has continuously been working for repair and maintenance of these integrated settlements as well as towards uplifting the economic status of the people under these settlements. All these settlements have been made as per the rules and regulations of Nepal Government. Our only objective is to createaprosperous Nepal and help our government towards raising the status of all the citizens. As we were appointed as
“Cleanliness and Hygiene Ambassador” from Nepal government, our noble dedication towards social work has now turned into duties and esponsibilities towards our nation.
नारायणगोपालको जीवनका केही रोचक प्रसंगहरू !गोपालको गित सुनेर रानी धेरै फिदा भएकी थिइन
जब-जब नेपाली गीत, संगीतको बारेमा सोचिन्छ वा चर्चा सुरु हुन्छ, नारायणगोपालको नाम सँगै जोडीएर आउँछ । मंसिर १९ अर्थात डिसेम्बर ४ तारिक, स्वरसम्राट नारायण गोपाल यस लोकबाट बिदा भएको २३ बर्ष पुग्दैछ तैपनी उनका गीतहरु आज पनि सर्बाधिक सुनिने र मन पराउने गीतमा पर्छन ।
बिक्रम सम्बत १९९६ असोज १८ गते काठमाडौं को किलगल टोलमा जन्मिएका नारायण गोपाल आज यसलोकमा हुनुहुन्न तर उहाँका सिर्जना जिवित छन, उहाँको स्वर जिवित छ । त्यो स्वर जस्मा अदभूत मिठास र गम्भिरता थियो, मान्छेका माया, प्रेम र बिरहका मर्मस्पर्शी भावहरु उनको स्वरमा सर्लक्क अटाएका थिए र नै त उहाँ यस लोकबाट बिदा भएर जाँदा लाखौं नेपालीको आँखा रसाएका थिए ।
एकदिन नारायणगोपाललाई कसैले सोधेछ “राम्रो स्वर हुने गायिकालाई कोइली भनिन्छ भने गायक लाई के भनिन्छ?” प्रश्न नसकिंदै जवाफ दिनुभएछ कोइला । साँच्चै नारायणगोपालको मुटु रक्सी र चुरोटले कोइला जस्तै भैसकेको थियो । त्यसैले ५१ बर्षको उमेरमै वहाँको निधन भयो र नेपाली संगीतको एउटा अध्याय यसरी बन्द भयो २०४७ मंसिर १९ गते । मृत्यु सबैको नियती हो तर पनि जस्ले आफु बाँचेको समाज र देशका निम्ती योगदान दिएको छ उ नै सच्चा सपुत कहलाउँछ । त्यसैले नारायणगोपाल नेपाल आमाका सच्चा सपुत हुन् । नेपाली संगीतमा उनको नाम सधैं श्रद्धापूर्वकलिइनेछ । वहाँको २३ औं पुण्य स्मृतिमा वहाँप्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन । हार्मो रेडियो अस्ट्रेलिया
चाहेर पनि निर्माता निर्देशकले खेलाउन सक्दैनन् अनमोल केसीलाई आफ्नो फिल्ममा कारण यस्तो पो रहिछ
काठमाडौँ । अहिलेका चर्चित र व्यस्त तीन अभिनेता हुन्– दयाहाङ राई, सौगात मल्ल र अनमोल केसी । निर्माता, निर्देशक यी अभिनेतालाई आफ्नो फिल्ममा लिन लालायित मात्र हुँदैनन् हल वितरक र डिजिटल अधिकार क्रेता पनि यिनीहरू अभिनीत फिल्ममा आँखा चिम्लिएर पैसा खन्याउँछन् । त्यसकारण यी तीन हिरो अहिले सर्वाधिक व्यस्त छन् । यी तीन हिरो अचेल को कहाँ, के गर्दै छन् त ?
रोमान्स किङ अभिनेता भुवन केसीपुत्र अनमोल केसी हाल ‘कृ’ फिल्मको सुटिङमा व्यस्त छन् । उनी हत्तपत्त फिल्म साइन गरिहाल्दैनन् । जसकारण उनलाई चाहेर पनि निर्माता, निर्देशकले आफ्नो फिल्ममा अनुबन्धित गर्न सकिरहेका छैनन् । विशेषगरी टिनएजरमाझ लोकप्रिय अनमोलका अहिलेसम्म प्रदर्शित चारवटै फिल्म– ‘होस्टेल’, ‘जेरी’, ‘ड्रिम्स’ र ‘गाजलु’ले निर्मातालाई नाफा दिलाएका छन् । त्यसकारण पनि उनी निकै ‘रिजर्भ’ बस्ने गरेका छन् । कृपछि अनमोलले बाबु भुवनको निर्माण र दिवाकर भट्टराईको निर्देशनमा बन्ने फिल्ममा अभिनय गर्ने बताइन्छ ।
दयाहाङ अचेल ‘नेप्टे’ फिल्मको सुटिङमा व्यस्त छन् । नेप्टेको पोखराआसपास र धम्पुसमा सुटिङ भइरहेको छ । देवकुमार श्रेष्ठको निर्देशनमा रोहित रुम्बा निर्माता रहेको फिल्मको लभगभ ५० प्रतिशत सुटिङ सकिएको बताइन्छ ।
नेप्टे सुटिङबाट केही दिनका लागि दयाहाङ बुधबार राजधानी आए । आफू संलग्न मण्डला थिएटरको केही मिटिङ सकेर उनी फेरि धम्पुस पुग्नेछन् । नेप्टेपछि दयाहाङले पत्रकार फूलमान वलको फिल्ममा अभिनय गर्नेछन् । त्यसपछि उनी आकाश अधिकारीको निर्देशनमा अभिनेत्री श्वेता खड्काले निर्माण गर्ने ‘कान्छी’ फिल्मको सुटिङमा व्यस्त हुनेछन् । झन्डै एक दर्जन फिल्ममा अनुबन्धित भइसकेका दयाहाङ ०७५ सालभरिलाई नै व्यस्त छन् ।
सौगात अचेल अर्जुनकुमारको फिल्म ‘फाटेको जुत्ता’को सुटिङमा व्यस्त छन् । वीरगन्जका विभिन्न स्थानमा खिचिरहिएको फाटेको जुत्ताको सुटिङ सकिन अझै दुई साता लाग्ने निर्माता अर्जुनकुमारले बताएका छन् । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
वीरगन्जमा अत्यधिक गर्मी भएकाले त्यसको असर सुटिङमा पनि परेको अर्जुन बताउँछन् । सौगात प्रमुख भूमिकामा रहेको फाटेको जुत्ताको सबै दृश्य वीरगन्जआसपासमै खिचिनेछ । फाटेको जुत्तापछि भदौबाट सौगात लगातार नै सुटिङमा व्यस्त हुनेछन् । सौगात पनि यो वर्षका लागि ‘प्याक’ भइसकेका छन् । उनलाई दिनहँुजसो नै निर्देशकहरूले फिल्म अफर गरिरहेका छन् । तर, उनको समय मिल्ने सम्भावना यो वर्षलाई लगभग अन्त्य नै भइसकेको छ । उनका ‘बमकाजी’, ‘लालपूर्जा’, ‘मेरो पैसा खै’, ‘झ्यानाकुटी’लगायतका फिल्म प्रदर्शनका लागि तयार हुँदै छन् ।